ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၇-၃-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၇-၃-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှားသွားသလား (အသံ) click
- လက်ပံတောင်းတောင် မြေယာလျော်ကြေး စပေး click
- ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ လျော်ကြေး လက်ခံရယူသူ နည်းနေသေး click
- တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေ မြန်မာကို လေးစားဖို့ လိုအပ် click
- လက်ပံတောင်းအစီရင်ခံစာ ကန့်ကွက်မှုနဲ့ နိုင်ငံရေးဂယက် (တိုက်ရိုက်လေလှိုင်း) click
- တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက် လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြဖို့ သီတဂူဆရာတော် မိန့်ကြား click
- ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စိတ်ရှည်ကြဖို့ တိုနီဘလဲ တိုက်တွန်း click
- ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်လာရေး click
- လက်ကျန် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစာရင်း ပြုစုနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်း click
- တံတားနီ ငွေရတု ကျင်းပ click
- တံတားနီ အရေးအခင်း နှစ်ပတ်လည်နေ့ ကျင်းပ click
- တံတားနီ ဖြစ်ရပ်မှန် ဖော်ထုတ်သင့် click
- ၈၈ ခေါင်းဆောင် ကိုဌေးကြွယ် ဝါရှင်တန်ဒီစီ မြန်မာမိသားစုနဲ့ တွေ့ click
- ၈၈ မျိုးဆက် ကိုဌေးကြွယ်နဲ့ စကားစမြည် click
- အော်ကလန်မြို့ ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသို့ (အသံတိတ်) သမ္မတကြီး ရောက်လာခြင်း click
- ဝန်ထမ်းတွေ လစာ ကျပ်နှစ်သောင်းစီ တိုးမယ်လို့ဆို click
- စားစရာမရှိတဲ့သူနဲ့ ထားစရာမရှိတဲ့သူရဲ့ တိုက်ပွဲမှာ ကြားချဖို့ ပြောနေသူအားလုံးအတွက် ရည်ညွှန်းတဲ့စာ (ဆောင်းပါး) click
- နိုင်ငံရေးပဲ လုပ် လုပ် ဇာတ်ပဲ က က ပြည်သူချစ်ဖို့ လိုသည် (ဆောင်းပါး) click
- တဆိတ်လေး နားထောင်ပေးကြပါ (ဆောင်းပါး) click
- ရင်ကို ထိမှန်စေခဲ့သော မြားချက်များ (ဆောင်းပါး) click
- အတ္တမာန … တောတိုးဆင်ကန်းနှင့် နှပ်ကြောင်းလမ်းမ click
- အစ္စရေး အစိုးရသစ်ဖွဲ့ကြောင်း ကြေညာ click
- ဇင်ဘာဘွေ ဖွဲ့စည်းပုံသစ် ဆန္ဒခံယူ click
- တရုတ်အစိုးရသစ် ရင်ဆိုင်ရမယ့် စိန်ခေါ်မှုများ click
- မြောက်ကိုရီးယားကနေ တောင်ကိုရီးယားကို ခြိမ်းခြောက် click
- ပုပ်ရဟန်းမင်းသစ်ကြီး မီဒီယာနဲ့ တွေ့ဆုံ click
- ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး စွပ်စွဲမှုနဲ့ ကြုံနေ click
- အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး ကုလကြေညာချက် ကန့်ကွက်သူမရှိ click
- ကျား/မ တန်းတူ လစာရရှိစေရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက် click
အဓိက က ပြည်သူ.တွေ၇ဲ.အသံ ကိုနားထောင်ပါ
ပြည်သူတွေဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံ တ၀ှမ်းလုံးကပြည်သူတွေကိုဆိုလိုပါတယ် ။ ၊ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်တဲ.
ပြည်သူတွေကို လက်နက် အားကိုး နဲ.မလုပ်ပါနဲ. ။
မိတ်ဆွေ တွေးခေါ်ရေးသားချက် မှန်ကန်မျှတ မှုရှိပါသည်။
IQ EQ CQ ရှိကြသောခေါင်းဆောင်ကောင်းများ
နောက်လိုက်ကောင်းများ တိုင်းပြည်အတွက် များများပေါ်ပေါက်ပါစေ
အခုဟာက အဲဒိ ပြဿနာ အလုံးစုံကို ဖြေရှင်းတဲ့ နည်းနဲ့ အေးချမ်းမျှတအောင် လုပ်ဆောင်ပေး နေတာကို နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး လူ မှု ဘဝ တိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်ကြပါလို့ 
ပညာအ ခြေခံတဲ့အ တွေအ ခေါ် ဆို ရင် လက်ခံပါတယ်